Asa fanaovan-gazety: niavaka ny fankalazana tao Toamasina | NewsMada
Asa fanaovan-gazety: niavaka ny fankalazana tao Toamasina
Par Webmaster Two sur 07/05/2018
Niavaka tanteraka tamin’ izay efa hita teto amin’ny firenena ny fandraisan’ i Toamasina ny Andro iraisam-pirenena ho fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy fampahalalam-baovao, noho ny fomba niavaka nataon’ny mpikarakara. Voalohany, nanorina sy nametraka
tsangambato ho fanamarihana izany Andro maneran-tany izany ny komity mpikarakara. Nitarika ny fikarakarana ny talem-paritry ny serasera, i Avizara Prixcilla, sy ny filohan’ny fikambanan’ny mpanao gazety (AJT), i Sabotsy José, ary ny mpanolontsaina anivon’ny holafitra. Nisy ny fitokanana ilay tsangambato teo amin’ny araben’ny Fahaleovantena. Taorian’ izay, nisy fitsidihana ny tranoheva momba ny fampahalalam-baovao sy radio, fahitalavitra ary ny gazety an-tsoratra. Rehefa vita izay, niroso tamin’ny kabary isan-karazany tao amin’ny efitranon’ny lapan’ny faritra Atsinanana, fotoana nilazan’ny komity tamin’ny alalan’i Sabotsy José fa tsy nitsanga-menatra amin’ny fandraisana ny fankalazana ny mpanao gazetin’ i Toamasina. Fiaraha-misakafo no namaranana ny tapak’ andro maraina.
Resy hatrany ny mpanao gazety
Tsy nahahovoka kosa teo amin’ny fifaninanana fanatanjahantena taranja basikety sy baolina kitra ny mpanao gazety. Norobahin’ny vondron’ny talem-paritra sy mpiasam-panjakana tamin’ny isa 4 no 0 ny mpanao gazety teo amin’ny baolina kitra, tetsy amin’ny kianjan’ny kaominina monisipaly. Resy, tahaka izay, ihany koa teo amin’ny basikety; 32 ho an’ny vondron’ny mpiasam-panjakana raha 28 kosa ny an’ny mpanao gazety. Tsy nifarana teo ny fahankalazana fa nitohy tamin’ny fitsangantsanganana nanaraka ny lakandranon’i Pangalanina, ny zoma lasa teo.